Hodan 2018 ee sanadka, ugu fiican | Top melodramas 2018 ee sanadka, liiska ugu fiican | Melodrama 2018 sanadka, muusikada ajnabiga ah melodrama | Liiska ugu wanaagsan ee wanaagsan ee 2018 | NASASHADA - 2018
Heerka ugu wanaagsan 2018 ee sanadka - Top 10
1 Shantii siyood ee xorriyadda
2Women dhanka ragga: fasaxyada Crimean
3How si aad ula hadasho gabdhaha xafladaha
5Back Up Me Up
7 Marwalba Waligeyga saaxiibkay
9Face ilaa Frankenstein
Mid ka mid ah jilayaasha haweenka ugu jecel filimka ayaa ah melodrama. Filimadan oo kale, daawadayaashu waxay arki karaan duni buuxa oo dareen ah, isxilqaan iyo ku raaxaystaan ​​marka geesiyaal la jecel yahay oo ku dhacay xaalad nololeed oo adag ay mararka qaarkood ku adkaato, laakiin go'aanada saxda ah. Noocyada melodrama waa mid aad u qulqulaya, oo u sheegaya dhibaatooyinka adag ee u dhexeeya wanaagga iyo sharka, ku saabsan cafiska iyo jacaylka, taas oo ciribtiri karta nacaybka.
Waayo, kuwa jecel nolosha kaliya ee noo muuqata waxaan samaynay xulasho ugu wanaagsan xNUMX melodrama sano. Liistada novelties waxay ka kooban tahay filimyo kala duwan, laakiin lama filayo filimyo xiiso leh oo uqalma dareenka daawadayaasha. Xidigeena ugu sareeya 10 ee 2018 waxaa ku jira filim ka mid ah filim sameeyayaasha ajnabiga ah iyo kan gudaha.
1Soddon sanadood oo xorriyad ah
Premiere ee Ruushka: 8 February
Wuxuu furaa liiska casriga ugu wanaagsan ee loo yaqaan '2018 melodrames of the year' ee "Sallaalaa saddax xor ah". Anastacia waxay ku nooshahay nafta jinniga. Waxay qabaan wax walba oo wanaagsan marka arooska la joogo. Waxay jecel yihiin maalin kasta. Wax walba way ka baqayaan markii cadowgu uu naftiisa ku soo galo. Wuxuu rabaa in Nastya looga aargoosto siyaabo kasta, isagoo isticmaalaya waayo aragnimadiisa noloshiisa weyn. Masiixiyiintu sidoo kale waxay lahaayeen dhibaatooyin horey u soo maray, oo ay tahay in lagu xalliyo xilligan. Haddii ay lamaanayaasha cusubi awoodi doonaan inay la qabsadaan dhibaatooyinka, waxaan si dhakhso ah uga heli doonnaa filimka cusub ee James Foley. Tababaraha wuxuu ku ciyaari doonaa xiddiga quruxda badan ee Kim Baines, oo loo yaqaan 'Batman' iyo 'Sagaal iyo toddobaad gudahood. "
2Dumarka ka soo horjeeda ragga: fasaxyada Crimean
Ka dib furiinka, guys ayaa go'aansaday in ay tagaan fasax si ay u nastaan ​​oo ay u helaan xoog. Tani, dabcan, waxaad kaloo u baahan tahay inaad qaadato saaxiibo dhowr ah. Dibadbax ayaa jabay, markii uu hudheel ku jiro hoteelka, wuxuu u muuqday qof xaaskiisa hore ah, oo u muuqda inuu kor u kacay. Laakiin waxay kaloo qaadatay saaxiibadeeda, kuwaas oo horey u guursaday asxaabteena "dalxiis". Halkii laga nasto nasasho qadarin leh, dagaalka dhabta ahi wuxuu bilaabmaa. Cabashooyinka hore waa mid aan cidna iloobin. Waxaad sugeysaa daqiiqado jimicsan oo jilicsan oo ku saleysan ragga raga ah ee ka dhanka ah haweenka iyo kuwa kale! Waxaas oo dhan waxaad ka arki doontaa riwaayadda majaajilada Ruushka 2018 ee sanadka "Haweenka ka soo horjeeda ragga: ciidaha Crimean".
3Sida loola hadlo gabdhaha xafladaha
Premiere ee Ruushka: 22 February
Dhacdooyinka melodrama waxay daawadayaasha u qaadaan sanadka 1977. Punks ayaa muddo dheer laga iibin jiray istuudiyo ganacsi oo leh jahwareer. Qof kastaa wuxuu ka sheekeynayaa wargeyska "Virus" saddex saaxiibo ah oo hadiyo goorba la ixtiraamo dhaqanka punk. Marka ay galaan guri qariib ah, halkaas oo ah waqtiga oo dhan waxaa jira muusik aan la aqoon. Waxaa jira dad aan caadi ahayn. Dumarka waxay go'aansadaan in ay meeshan ku bartaan iyaga. Waxay u horseedi doonaan saaxiibtinimo leh Zan qurux badan, oo leh Stella jimicsiga qurxinta iyo qoob ka ciyaara qurux badan. Dhammaantood way fiicnaan lahaayeen, haddii aysan ahayn mid "Laakiin" - waxay yihiin dhammaantood shisheeye. Maxaa ka iman doona melodrama cajiib ah oo leh qoraallada majaajilada ah, waxaad ka ogaan doontaa adigoo daawanaya filimka.
Premiere ee Ruushka: 1 Maarso
Sheeko jacayl ah oo ka fog fog. James wuxuu wakhti dheer ku shaqeyn jiray howlaha baaritaanka, lakiin waxaa la qabtay argagixiso Soomaali ah. Daaniyadu waxay baraneysaa biyaha ugu khatarta badnaanta badaha adduunka, waxay ku foorarsadaan badmareenada si qoto dheer oo aan horay loo arag. Labadooduba waxay ka soo xasuustaan ​​waqtiyadan cidlo ah ee ku saabsan sida ay isugu wada qabteen. Waa sheeko aad u fara badan oo sheeko leh oo mid waliba had iyo jeer xasuusato waxyaabaha wanaagsan. Ka dibna wakhtiyada ugu adag waxaad awoodi doontaa inaad tusto dhammaan tayada aad u fiican. Filimka Wynne Wenders, oo na tusay "Saltka Dunida" iyo "Sky Sky Berlin".
Bartamaha liiska ugu wanaagsan melodramas 2018 ee sanadka waa filim Ruush ah oo ku saabsan saddex gabdhood oo riyooyin ku riyaaqaya. Mid kastaa wuxuu leeyahay sheeko u gaar ah sida ay u bedeleen noloshoodii hore iyo gebi ahaanba. Laakiin siyaabahoodu aad ayuu u kala duwan yahay. Si ay u gaaraan ujeedooyinkooda, waxay wax badan u daadiyeen. Sheekada meesha riyooyin waxay keeni kartaa in Dhuxul Porsche cusub, a ninkeeda-Abramovich, jacaylka iyo jinsiga iyo nolol qurux badan ... Laakiin waxaa suurto gal ah si ay u gaaraan riyada u tari jirtay oo aan jabiyay wadada? Doorka ugu weyn waxaa ka mid ah Anya Adamovich, Sveta Ustinova iyo Yulia Hlynina. Muujin aan toos ahayn oo ku saabsan raadinta macnaha nolosha iyo hirgelinta riyo dhab ah.
Premiere ee Ruushka: 22 Maarso
Habeenkii Cathy waxay ku heesataa sheekooyin aad u heersare ah oo leh guitar, sababtoo ah waxay ku soo laabatay 17 sano jir. Galabtii, sababtoo ah jirro, ma soo baxayso qorraxda, oo ku dhuumanaya hooska. Hal fiid ah waxay la kulantaa ninkeeda quruxda badan ee la yiraahdo Charlie, oo madaxeeda u rogay dhoola cadeynaya. Gabadha weyni waxay ku iftiimaysaa dabacsanaan iyo jacayl waalid. Waxay diyaar u tahay in ay gubto qorraxda, haddii uun uun maalin kale la joogayo. Doorka ugu weyn waxaa ka mid ahaa Patrick Schwarzenegger iyo Bella Thorne.
Premiere ee Ruushka: 19 January
Liam wuxuu ka tagay magaaladiisa yar yar isagoo rajeynaya in uu noqdo muusigga muusikada ah ee 10 sano ka hor. Lama joojin xitaa xaqiiqda ah in maalinta arooska loo doortay jacaylkiisa Josie. Waad ku qososhay isaga. Wuxuu caan ku noqday dalkiisa. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'King of Country Music'. Dhammaan wixii ku jiray noloshii hore, ma daryeesho nin. Laakiin saaxiibka uu caruurnimadiisa geeriyoodo, midna waa inuu tagaa dhulkiisa hooyo. Keliya markaas ayuu ogsoon yahay in dhammaan ammaanta uusan isaga ku faraxsaneyn. Waxa uu lahaa taageerayaal badan, laakiin qalbigiisu waxaa jiray weli Josie oo kale. Waxa uu wajahayo wax walba oo uu ka tagay oo isku dayay inuu iloobo sannadkii hore 10. Kulanku wuxuu ballan-qaaday inuu aad u adag yahay.
Veleslava waxaa loo qaaday sidii caadooyinka qarniyadii hore. Anya oo ka timid qoys reer Christian ah. Waxay jeceshahay ninka aadka u badan, laakiin aabaheed ma rabto in ay tan maqasho. Wuxuu ka soo horjeedaa ka qaybgalka iyo arooska. Lamaane wali waxay doonayaan in ay wadajir u helaan. Veleslava u diray ciidanka. Anya sababo aan la garaneyn ayaa tagay magaalada, iyada oo aan sugin nin. Hadda wuxuu leeyahay hal shaqo - inuu ku soo noqdo jacaylkiisa. Wuu yaabaa markii uu helo. Doorka ugu weyn waxaa ka mid ah Veleslav Ustinov iyo Julia Chaika.
9Dareenka ka hor Frankenstein
Premiere ee Ruushka: 9 Ogosto
Sheekada gabdhaha 18, oo jacayl la leh dhagaha gabayada quruxda Percy. Maryan waxay diyaar u tahay inay raacdo isaga oo u safraya Lord Byron, oo ku noolaa meel u dhow Lake Geneva. Waa halkan in qoraaga caanka ah Marry Shelley uu abuuray qoraaga ugu caansan ee ku saabsan Frankenstein. Waxaa iyadu u waxyoonay xiriirka ay la leedahay ninkeeda Percy, taas oo ah dareenka iyo dareenka rabshadaha ah. Abaalmarinta ayaa la ciyaari doona El Fanning iyo Macy Williams. Waxaa hoggaaminaya gabadh dhallinyaro ah Haifa Al-Mansor.
Premiere ee Ruushka: 14 February
Dhamaystiraan liiska melodramas 2018 ee sanadka ee filinka Ruushka "Ice". Nadia had iyo jeer waxay rumaysantahay in mucjisooyinka dhacaan. Marwaliba waxay haysaa hal dhibic madaxeeda: Nadia waxay ka baxdaa barafka, qoob ka ciyaarka, iyo dhagaystayaasha xiisaha leh farxad iyo cabsi. Sababta iyo shaqadu waxay awood u leeyihiin in ay riyadan ku turjumaan xaqiiqda. Laakiin ma aha wax walba waa mid fudud. Xaqiiqda ka hor guulaha weyn ee ay nolosheeda ku dhowaato burbur. Kaliya tijaabooyin adag ayaa la socda. Si aad u mariso dhammaan arrimahan, waa in aad mar kale rumaysatid riyada carruurnimada ah in wax aan macquul ahayn. Sheeko wanaagsan oo nolosha ku saabsan oo ku saabsan dadka leh "birta" waxay rajeynayaan rajo weyn oo mustaqbal wanaagsan leh.
Filim Ruush ah oo uqalma dhibcaha ugu sareeya.
2019 filimada jiilaalka oo qiimo leh!
Filimooyinka sare ee 2019. Maxaa la arkayaa?
Wararkii ugu dambeeyay ee filimka Ruushka 2018 - filim tayo leh oo loogu talagalay dadka lala xiriirayo
Walaac madaama uu muuqan karo, filimkaan ayaa doortay ninkaygu markii uu la yimid filimka, isla markaana inkastoo xaqiiqda ah in filimkii ugu horreeyay ee "Haweeneydani raggu" aan si aad ah wax nooga dhigin, waxaan ku qoslnay shineemada (si fiican, aniga shakhsiyan marka laga reebo goobta ugu dambaysa ee haweenka ka dhanka ah ragga). Iyadoo fikradda ah wakhti fiican, qosol, waxaan go'aansanay inaan daawanno filimkaan ... .. iyo waxay niyad jabeen! Labo qosol oo wanaagsan iyo aragtiyo qurux badan oo Crimean ah midna waa mid qaali ah oo hudheel ah, kaas oo lagu soo bandhigay waqtiga oo dhan.